SHEEKADA OO GABO GABO SOO GAARTAY: Morata oo ka tagaya Chelsea iyo Higuain oo soo Cago dhiganaya….(Ka Bogo Wararkii ugu dambeeyay) – Gool FM
SHEEKADA OO GABO GABO SOO GAARTAY: Morata oo ka tagaya Chelsea iyo Higuain oo soo Cago dhiganaya….(Ka Bogo Wararkii ugu dambeeyay)
(Europe) 21 Jan 2019. Tababaraha Chelsea Sarri ayay ka go’an tahay sidii uu ku heli lahaa Weeraryahan Cusub maadaama uu qaati ka soo istaagay Alvaro Morata iyo OIivier Giroud.
Kulamadii dambe ayuu macalinka reer Talyaani bilaabay inuu False 9 ka ciyaarsiiyo Eden Hazard waxayna taa u muuqataa inay socon waysay iyadoo ayna sii korortay dhibaatada weerarka ee kooxda.
Haddaba Waxaa iminka gabo gabo ku dhow inuu Blues soo cago dhigto Gonzalo Higuain halka Alvaro Morata lagu wado inuu kooxda ka tago, waxaan Halkan idinku soo ururinay wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan sheekadan.
Express ayaa qortay in maalinta Berito ah lagu wado inuu London ka soo dego dhaliyaha reer Argentina ee Higuain si uu u dhammeystiro heshiiska uu ku imaanayo gegada Stamford Bridge.
Tababaraha Milan Gattuso ayaa Higuain ka reebay shaxdiisa kulanka Maanta ee Genoa isagoona qiray inuu aqbalay go’aankiisa.
Bertio ayaa lagu wadaa in laacibkii hore ee Real Madrid uu soo gaaro London si uu heshiiska u dhammeystiro, waxaa lagu wadaa inuu Blues ku joogi doono heshiis amaah ah inta ka harsan kal ciyaareedka balse waxaa heshiiska qeyb ka noqonaya inuu 12-bilood oo dheeri ah saxiixi karo.
Dhanka kale The Sun ayaa qortay in heshiiska uu Alvaro Morata ugu biirayo Atletico Madrid la soo afjaray.
Blues ayaa khasaareysa 16.5 milyan oo bound si ay Morata dib ugu celiso magaalada Madrid.
Kooxda reer London ayaa weeraryahanka reer Spain Real Madrid uga soo iibsatay 65-milyan 2017-dii, balse laacibka ayaa iminka lagu wadaa inuu marka hore heshiis amaah ah inta ka harsan kal ciyaareedka ugu biiro Atletico Madrid taa oo suuqa xagaaga si joogta ugu iibsan karta 48.5 milyan oo bound.
Saxafiga lagu Magacaabo Fabrizio Romano ayaa bartiisa Twitter ka ku soo qoray in la dhammeystiray heshiiska uu Morata ugu biirayo Atletico Madrid.
Haddaba wixii warar ah oo ka soo kordha sheekadan kala soco wararkeena dambe ee Goolfm.net.
De Bruyne oo hal arin ugu baaqay Saaxiibadiisa Manchester City si ay ugu guuleystaan Premier League
SHALAY waxay ahaayeen isku Koox iyo waliba isku Xul MAANTANA waa Laacib iyo Tababarihiisa....+SAWIRRO